Bella Hadid ayaa qirtay in ay ku faani karto inuu yahay Muslim
Stars Riixo xiddigaha
Bella Hadid oo 20-jir ah, oo ka mid ah 10-ta ugu badan ee la soo bandhigay, ayaa mar kale ku farxay taageerayaashiisa muuqaalkiisa oo ku yaal daboolka majaajiladda. Waqtigaan, waxay soo bandhigtay qodobka Juun ee daabacaadda ee Porter, kuwaas oo geesinimo ayeey noqotay.
Bella Hadid on daboolka ah Porter
Bella waa ku faraxsan tahay inay tahay Muslim
Wareysigeeda, oo dhacay ka dib markii la helay sawir muuqaal ah, Hadid wuxuu go'aansaday inuu ka hadlo diinta. Gabadha ayaa u sheegtay in aabbaheed Maxamed Hadidid uu yahay Muslim, oo ay aad uga welwelsan tahay arrintan. Taasi waa nooca tusaalaha ah ee ku yiri wareysiga:
"Waxaa la ii keenay qoys aad u diineed. Aabahay wuxuu yimid Ameerika oo ka yimid Suuriya markuu ahaa 14 sano jir. Waxa uu isku dayey inuu wax baro Gigi, sidii uu waalidkiis u keenay. Maalin kasta waan tukanay waana ku riyaaqay. Waan ku faanayaa inaan noqdo Muslim. "
Bella Hadid oo leh aabihii Maxamed
Ka dib, in yar ee walaalahey Hadid go'aansaday in ay wax yar ka hadlaan siyaasadda socdaalka ee Donald Trump. Taasi waa maxay Bell:
"Ma jecli qaabka madaxweynaha dalkeena uu ula dhaqmayo muhaajiriinta. Aabahayga qudhiisu wuxuu ahaa hal booqasho, laakiin taasi macnaheedu maahan inay tahay wax xun. Waxa uu bilaabay in uu ku noolaado Maraykanka sida qaxooti. Taasi waa sababta mawduuca siyaasadda socdaalka, oo mamnuucaya galitaanka Muslimiinta Maraykanka, aad iigu dhow. "
Ka dibna Bella waxay ka hadashay midba midka kale:
"Waad ogtahay, hadba nooca shaqadeyda, aad ayaan u socdaa meeraha. Hadda waxaan kuu sheegi karaa dhammaan mas'uuliyadda in aysan jirin dad wanaagsan ama xun. Dadka oo dhan way siman yihiin waana inay u qalmaan xiriir wanaagsan oo midba midka kale ah, iyada oo aan loo eegin dhalashada. Waa inaad u naxariisto oo ixtiraamtaa midba midka kale. Tani waa mid aad u muhiim ah. Amarkan dunidu waa in lagu dhisaa tan. "
Bella Hadid wareysi uu siiyay majaladda Harper Bazaar ayaa ka hadlayey madadaalo, paparazzi iyo wejigii abid
Bella Hadid waxa ay ka dhigtay fur furan iyada oo ku taala Cannes ee caanka ah ee Cannes
Bella Hadid iyo Isbuucii la soo dhaafay ayaa ku biiray Cannes
Taageerayaasha ayaa ku dhalliilay Bella erayada iyo dharka
Wareysiga ka dib, Hadid wuxuu u muuqday internetka, Muslimiin badan ayaa cambaareeyay Bella. Dadku ma siinayaan nasasho xaqiiqda ah marka la hadlayo diinta Islaamka, qaab 20 jir ah ayaa si fiican u dhibi kara dhib la'aan. Intaas waxaa sii dheer, dad badan ayaa ka xishoodsanaaya ayada oo ay ka muuqato nolol maalmeedka. Waa kuwan waxa aad ka akhrisan kartid internetka: "Muslimiinta ma ayan u dhaqmin habkan. Mana dhaleeceyn karaan jirkooda qaawan, xitaa haddii ay ka walwalsan tahay shaqada, "" Waa maxay nooca haweenku yahay Muslim? Miyey xitaa ogtahay waxa uu yahay? Gabdhaha muslimka ah ma tagaan gaabnaanta gaaban oo aan dhar lahayn, "" Waxay leedahay fikrad qariib ah oo ah waxa diinta Islaamka ah. Dhismaha nolosha Bella waxaa loo saari karaa wax, laakiin maaha diinta Islaamka ", iwm.
Sidaas darteed Bella waxay soo gashaa shaqada
Hadid qaawan oo loogu talagalay majaladda fashion
Beauty ma aha mid isku mid ah: xaaskii Mark Wahlberg oo la yaabay qaabab la yaab leh!
Kaya Gerber ayaa laabta ku kordhiyay?
Milla Jovovich ayaa wareysi siisay gabadheeda gabadha Ever
Zoe Saldana: sida jirdhis jidh ahaaneed wuxuu helaa isafgarad oo wuxuu noqdaa tusaale tusaale ah
Sandra Bullock ayaa wareysi siinayay taageerada fannaanka "Siddeed Siddeed Saaxiibtinimo"
Jennifer Lopez: Jacaylka iyo guurka uma baahna dhaqsi
Victoria Beckham mar kale waxay ku iftiimaysaa daboolka Vogue waxayna bilaabeysaa mashruuc cusub!
Margot Robbie wuxuu sharaxay sababta ay uugu soo galeyso giraanta ka qeyb qaadashada kaliya dhamaadka todobaadka
Keith Harington wuxuu xusuustay waayo-aragnimadiisa jinsiga koowaad!
Paparazzi "qabsaday" Milo Kunis oo caloosha uurka leh
Xaqiiqada dhabta ah ee ku saabsan "The Last Tango in Paris" laga bilaabo afka Bernardo Bertolucci
Si loo dhibo Harvey Weinstein ku xiran ... Tarantino iyo Depardieu!
Salma Hayek wareysi uu siiyay Red ayaa u sheegay sida loo koriyo carruurta
Dhir daawoyin ah
Biscuit on liimey oo ku kala duwan
Qalabka timaha loogu talagalay waji buuxa
Merino dhogor - waa maxay?
Xaggee lacag lagu maalgeliyaa internetka?
Dharka dharka xilli-cayaareed ee carruurta
Laaluushka leh gacmo gaaban
Miyaan ubaahanahay in aan tallaalo carruurta?
Maalinta Cunnada Caalamiga ah
Dharka loogu talagalay haweenka ka weyn 50 sano
Visa u dirista Spain adigoo ku martiqaadaya
Kabaha quruxda badan
Saacadaha timaha loogu talagalay wiilasha - 34 doorasho oo ilmahaagu jecel yahay
Maqaarka dhallaanka maqaarku waa maqaar dillaacsan
Sawirada ballanta 2016
Kansarka sanbabada - astaamaha ugu horreeya
Waxa la nadiifinayo lacag dahab ah?
Muraayadaha Dharka ee Dumarka
Qalabka timaha loogu talagalay carruurta ballan-qaadka ee xanaanada